रोचक यौ’न कथा : “खेताला लोग्ने ” – Sanjal Nepal
Homeरोचकरोचक यौ’न कथा : “खेताला लोग्ने ”
November 22, 2020 admin रोचक 5573
कुमारले आफनो ब्यथा सुनायो। ‘गरीबीमा भए पनि खुसी थियो मेरो परिवार। दुई छोरा, श्रीमति र म। कति सुन्दर थियो हाम्रो संसार। एकदिन म र श्रीमति घाँस का’ट्न जंगल गएका थियौँ। अचानक भीरबाट चिप्लेर ल ड्दा श्रीमतिको मृत्यु भयो। म भने रुखमा च्या ‘पिएर घाइते भएछु। भगवान दाहिना भएर मलाई जीवनदान त दिए तर, मेरो प्रजनन शक्ति त्यसैदिनबाट खोसिएर टाढा भयो, सँधैका लागि। उपचारपछि म बाँच्न सफल भएँ। त्यसपछि जानुसँग मागी विवाह भयो।
तर, सन्तानको रहरमा डुबुल्की मार्ने उसको चाहनाको अघिल्तिर मेरो कमजोरी के लुक्न सक्थ्यो र? यहि कुराले उनी दिनहुँ कलह गर्छिन्। कुशल र कुवेरलाई पनि आमाकोभन्दा सौतेनी गिद्धे दृण्टिबाट हेर्छिन्।’ कुमार सुनाउँदै गयो, ‘कैयौँ पटक कृत्रिम गर्भधारण गराउन खोज्दा पनि असफल नै हुन पुग्यो।
January 2, 2021 admin रोचक 3653
काठमाडौँ । पैसाको आवश्यकता सबैलाई पर्छ । अनि संसारमा सबैको चाहना हुन्छ कसरी धेरै पैसा कमाउने ? अझ हाम्रो समाजमा त पैसा कमाउन सकेन भने उसलाई असफलको संज्ञा दिइन्छ । त्यसैले हरेकले पैसा कमाउने जुक्ति
December 10, 2020 admin रोचक 4913
December 22, 2020 admin रोचक 11073
LEX 18 agenda conversation: Job club (445103)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418669)
Hello world! (345993)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318786)